﻿လေ﻿ပြေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ﻿လေ﻿ပြေ	8
Posted by ကာရံ on Jan 29, 2015 in Poetry | 8 comments
မေရယ် ချစ်ခရီးလမ်းလေး တစ်ကွေ့မှာ
အနားမှာနေခွင့်ပြုပါနော် . . . . . .
ကာရံ ၂၉့ ၁ ၂၀၁၅
kai says: လေ﻿ပြေ
(နောက်တာတွေ…။ စိတ်ဆိုးတော်မမူစေ…) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: လိုတိုရှင်းပြိုင်ပွဲဝင်ရင် ဆုရလောက်တယ်။
(နောက်တာ မဟုတ်၊ အတည်ပြောတာလို့ မယူဆစေချင်ပါ။) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ကဲ.
Mike says: .လေပြေ
.အတည်ပေါက်ေ၇းတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ဦးခင်ခ says: ခြေရာတူရင်
အလင်းဆက် says: ကဗျာလား..
naywoon ni says: ဟုတ်​တယ်​ ။ ဖျား​နေတာ​တော့မဟုတ်​ ။ writing ဘက်​ အာရုံ လှည့်​ထား​တော့ poem ဘက်​ မလှည့်​သာ​သေး ။
ဒါထက်​ စကား အတင်​စပ်​ လှိုင်း﻿အောက်﻿ကငါးက﻿လေးလူးလွန့်﻿ရင်း
ဆိုတဲ့​နေရာမှာ ” ​ခြေရာလိုက်​ရှာ’ဆဲ’ပါ” ဆိုရင်​ ပို​ကောင်းမလားလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 53
min kyansix says: ဆိုတော့ကာ
မျှော်တော်ယောင်ဘဝက ကျွတ်ဖို့လမ်းမမြင်ဘူးးးးး ဟီးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.